एमालेमा सकस : सके जति नेता तान्ने प्रयासमा ओली समूह, खनाल-नेपालको बाटाे कुन ?
ओलीले फ्याँके 'जेठ २' को कार्ड, नेपाललाई दवाव
फरकधार / २० जेठ, २०७८
राजनीतिक र सांगठनिक रुपमा दुई ध्रुवमा विभाजित भइसकेको नेकपा एमाले कानुनी रुपमा भने अहिलेसम्म एक नै छ । एमाले संस्थापन समूह र नेपाल–खनाल समूहमा देखिएको तीव्र मतभेदका कारण आज एकैदिन दुई समूहको बेग्लाबेग्लै बैठक बस्दैछ ।
एमाले संस्थापनको स्थायी कमिटी बैठक दिउँसो ४ बजेका लागि तय भएको छ । यता, खनाल–नेपाल समूहको बैठक भने अहिले ११ बजे भर्चुअल माध्यमबाट बस्ने भएको छ । खनाल–नेपाल समूहका ‘हार्डलाइनर’ नेता युवराज ज्ञवालीले बैठकको चाजोपाँजो मिलाएका छन् ।
पटकपटक सहमतिका लागि भएको प्रयास असफल भएपछि अन्ततः दुवै समूहका नेताहरु आ–आफ्नो बाटो रोज्ने निश्चितप्रायः भइसकेको एमाले नेता÷कार्यकर्ताको बुझाइ छ । नेपाल समूहका एक नेताका अनुसार जतिसक्दो धेरै आफूहरुका नेताहरु तान्ने प्रयासमा ओली समूह लागेको छ । जसको संकेत मंगलबार बसेको ओली समूहको बैठकपछि प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले दिइसकेका छन् ।
सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भनेका थिए, ‘सकेसम्म एकतालाई जोगाउन सकियोस्, धेरैभन्दा धेरै साथीहरु मूलधारमा अडिनुस् भन्ने नै प्रयास छ ।’
यसैबीच नेता नेपालले बुधबार आफूनिकट जनवर्गीय संगठनका नेता कार्यकर्ताहरूसँग भर्चुअल छलफल गरेका थिए । छलफलका क्रममा ओलीले पटक–पटक वार्ताको नाममा झुलाउने काम गरेको ब्रिफिङ गरेका थिए । ‘ओलीले आजसम्म कहिले पनि पार्टी पद्धतिको निर्णयलाई मानेनन्, उल्लंघन मात्रै गरिरहे’, नेपालले बुधबार भनेका थिए ।
सोही निष्कर्षसहित आजलाई बैठक बोलाएका नेता नेपाल अब नयाँ पार्टी खोल्ने कसरतमा रहेको उनी निकटस्थहरुको भनाइ छ ।
नेपाल समूहका नेता तान्ने प्रयासमा ओली
एमाले नेपाल समूहमा केही ‘हार्डलाइनर’ र केही ‘सफ्टलाइनर’ नेताहरु छन् । यीमध्ये केही नेताहरुलाई आफ्नो समूहमा तानेर बाँकीलाई छाडेरै अघि बढ्ने रणनीतिमा ओली समूह पुगेको छ ।
बुधबार दिउँसोका लागि बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक आजका लागि सारिएको छ । ओली समूहका एक नेताका अनुसार नेपाल समूहका केही नेताहरुलाई तान्ने प्रयास स्वरुप हिजोको बैठक सरेको थियो । बैठक स्थगित भएपछि एमाले नेता तथा कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले फरकधारसँग भने, ‘धेरैजसो साथीहरु मूलधार (ओली समूह) मै फर्कनुहुन्छ । त्यसैको प्रयास भइरहेको छ ।’
जसको प्रयासस्वरुप हिजै प्रधानमन्त्री कार्यालय, सिंहदरबारमा ईश्वर पोखरेल र योगेश भट्टराईबीच वार्ता भएको थियो । यसअघि सोमबार राति याक एन्ड यति होटलमा वार्ता भएको थियो । वार्ताबाट कुनै ठोस निश्कर्ष नदेखेपछि नेता पोखरेल पनि विवाद मिलाउने प्रयासस्वरुप लागि परेका छन् । त्यही निरन्तरता स्वरुप पोखरेलले भट्टराईसँग संवाद गरेका हुन् ।
स्रोतका अनुसार पोखरेलले यसअघि झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र भीम रावलसँग पनि कुरा गरिसकेका थिए ।
'जेठ २' को कार्ड, नेपाललाई दवाव
अध्यक्ष ओलीले नेता नेपाल एमालेमै बस्न तयार भएमा आफू सशर्त २०७५ जेठ २ मा फर्कन तयार रहेको बताइसकेका छन् । सोमबार रातभर भएको छलफलपछि उनकै समूहका दोस्रो तहका नेताहरुले सशर्त ओली मान्न तयार भएको ब्रिफिङ नेता नेपाललाई गराएका थिए ।
सोही विषयलाई केन्द्रमा राख्दै बुधबार नेता नेपालले आफूनिकट संगठनका प्रमुखहरुलाई ब्रिफिङ गरेका थिए । तर, ओलीले यो पटक पनि छलछाम गरेर देउवा नेतृत्वको सरकार बनाउन सर्वोच्च अदालतमा गरेको निवेदनको हस्ताक्षर फिर्ता लिन कार्ड फ्याँकेको बुझाइ छ ।
संसद पुनःस्थापना हुनसक्ने देखेपछि पुनः ओलीले सो कार्ड आफूहरुमाथि फालेको हुनसक्ने उनीहरुको बुझाइ छ । तर, नेता नेपाललाई भने यसमा दवाव छ । आफ्नो समूहका हार्डलाइनर नेताहरुले नेपाललाई यो ‘ललाइ फकाई’ मा नलाग्न भनेका छन् । सोहीबारे आजको भर्चुअल बैठकमा पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
नेपाल समूहका नेता बेदुराम भुसाल भन्छन्, ‘यहाँ हुन्छ थोरै तर बाहिर बजारमा आउँछ धेरै । एकता मिलनबिन्दुको केही भएको छैन । प्रदीप ज्ञवालीले हामी धेरैभन्दा धेरै साथीहरु ल्याउने प्रयासमा छौँ भनेर घोषणा नै गर्नुभएको छ, उहाँहरुले गर्न लाग्नुभएको पनि त्यही हो ।’ ओलीलाई कम्युनिस्ट एकता र आन्दोलनको माया नभएको टिप्पणी उनले गरे ।
नेपाल समूहमा फाटो ल्याउने प्रयास
एमाले विवाद मिलाउनका लागि गत जेठ २ मा कार्यदल बन्यो । १० सदस्यीय कार्यदल अहिले निस्क्रिय भइसकेको छ । ओलीले दोस्रोपटक संसद विघटन गरेको आक्रोशमा विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेमतो गरेपछि नेपाल समूहमै तीव्र मतभेद देखिएको छ ।
ओलीले असंवैधानिक रुपमा फेरि संसद विघटन गरेको नेपाल समूहको आरोप छ । उता, विपक्षी गठबन्धनसँग मिलेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन लागेको भन्दै ओलीले नेता नेपालसहित ११ जनालाई पार्टीबाटै साधारण सदस्यतासमेत नरहने गरी कारबाही गरिसकेका छन् ।
कारबाहीपछि भंग भएको वार्ता प्रक्रिया अहिले अनौपचारिक रुपमा नेता–नेताबीच सुरु हुन थालेको छ । जसको पहल स्वरुप हिजो सिंहदरबारमा ईश्वर पोखरेल र योगेश भट्टराईबीच वार्ता भएको थिए ।
नेता तान्न पोखरेलको सक्रियता
पोखरेलले हिजो सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा योगेशसँग भेटे । स्रोतका अनुसार पोखरेलले यसअघि झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र भीम रावलसँग पनि कुरा गरिसकेका थिए ।
स्रोतका अनुसार वार्तामा सहभागी गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे लगायतका नेताहरु ओली पक्षमा जान तयार छन् । आजको भर्चुअल बैठकमा नेता नेपालले गर्ने ब्रिफिङपछि उनीहरुको निर्णय आउन सक्ने निकटस्थहरुको भनाइ छ ।
ओलीका विश्वास पात्र समेत रहेका पोखरेलसँग आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने र को–को साथीहरु ओली समूहमा देखिएर लाग्नेबारे छलफल अघि बढेको बुझिएको छ ।
प्रकाशित मिति : जेठ २०, २०७८ बिहीबार १०:५:४६, अन्तिम अपडेट : जेठ २०, २०७८ बिहीबार १२:२५:२४
गण्डकीबाट पृथ्वी सुब्बाको बहिर्गमनले केपी ओलीलाई कति अप्ठेरो ?
रुपक चौलागाईं | ३० जेठ, २०७८
औषधि खुवाएर गर्भपतन गराउँदा महिलाको मृत्यु, अस्पतालमा आफन्तकाे प्रदर्शन
कृष्णसिंह धामी | २ असार, २०७८
‘खेत र माछा फार्म बग्यो, हजुरआमा हराउनु भो, माथिबाट हेर्दैछौँ, घर चाँही ठाडै देखिन्छ'
केदार गौतम | २ असार, २०७८
कोरोना महामारीका बेला राजा, महाराजाको झल्को दिने मन्त्री दम्पतीको भ्रमण
दिपक कर्ण/जनकपुर | १ असार, २०७८
कृष्णसिंह धामी | ३० जेठ, २०७८
देउवा र दाहाललाई एमाले मिल्ने डर, नेपाललाई फकाउन विपक्षीको दौडधूप !
रुपक चौलागाईं | ३१ जेठ, २०७८
भेरी अस्पताल प्रकरण स्वास्थ्यकर्मीको माग, ‘दोषीलाई कारबाही गर’ |
फरकधार कोभिड खबर बैशाख २९
यो ३ हप्ता हामीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेनौ भने भयानक परिस्थिति आउन सक्छ ।
news 3उपचार मात्रैले संक्रमण नियन्त्रण हुदैन स्वास्थ्यका मादण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुपर्छ ।
के फेरि ओली नै हुन त प्रधानमन्त्री ?
कोभिड अपडेट बैशाख २८
कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यको आरोप : एमाले कार्यकर्ता ओलीका दास बन्दैछन्
(प्रदेश सभा बैठक) बागमति प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिँदै - २०७८जेष्ठ १७ गते
राष्ट्रियसभा सदस्यको सपथ ग्रहण गर्दै डा. खिमलाल देवकोटा
निषेधाज्ञाले संशोधित ४.०१ प्रतिशत आर्थिक विद्धि पनि नहुने : अर्थमन्त्री
नगरबासीलाई काठमाडौं महानगरको आग्रह : केही दिन मात्र घरमा बसौं
संकट व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल : संकट विज्ञ डा. राम थपलिया
झलनाथको वक्तव्यले नयाँ पार्टी खोल्न तयार माधव समूह तरंगित